केहि हप्ताअघि एक अनलाइनमा अन्तरवार्ताका लागी प्रस्ताव आयो । उनि चलचित्र निर्माण टिमको सल्लाह अनुसार अन्तरवार्ताका लागी गइन् । त्यहाँ लामै कुराकानी भयो । घर आउन नपाउँदै युट्युवमा भिडियो कुराकानी र अनलाइनमा समाचार समेत आयो । अन्तरवार्तामा हेडिङ थियो, ‘आयुषमानकी पुर्व प्रेमी !’ -- पुरै पढ्नुहोस् --
रिग्रेट हुन्छु : श्वेता खड्का
धेरैले उनका बाल्यकालका कुरा सुनाउँदा विश्वास गर्दैनन् तर श्वेता आफै ती कुरा सम्झदा सारै रिग्रेट हुन्छिन् । उनी आफै भन्छिन्–म सारै जिद्दी थिएँ, ममीलाई सारै दुःख दिन्थें । सारै डिमान्ड गर्थें । -- पुरै पढ्नुहोस् --
केराटिन केशलाई बलियो बनाउने तत्व हो जुन प्राकृतिक रूपमै हाम्रो केश तथा नङमा पाइन्छ । केराटिन मानव शरीरमा पाइने प्रोटिनको त्यो समूह हो जसले केश, छाला एवं नङ निर्माण गर्छ । मानव शरीरमा जुन ठोस संरचना हुन्छ त्यो केराटिन प्रोटिनका कारणले हो । -- पुरै पढ्नुहोस् --
डा. जे.पी. जैसवाल, कार्डियोलोजिस्ट, चैत्र ७, २०७५
अनिद्रा, छटपटी, उच्चरक्तचाप, टाउको दुख्नु, मनमा त्रास भैरहनु आदि यसका लक्षण हुन् । आधुनिक समयको व्यावसायिक मार्केटमा प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । यो समस्या अहिलेको विकराल समस्या हो । पछिल्लो तथ्यांकले हरेक ५ जनामध्ये ३ जनालाई उच्च रक्तचापको समस्या भएको देखाएको छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --
स्किन आर्ट्स एस्थेटिक्स
रारा कम्प्लेक्सस्थित स्किन आर्ट्समा केश प्रत्यारोपण, लेजर सेवा, चाउरीपनको उपचार, पिआरपी थेरापीका साथै दाग तथा ट्याटु हटाउने, अंग मिलाउने एवं कस्मेटिक शल्यक्रियाको सेवासमेत उपलब्ध हुने बताइएको छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --
दिनको सुरुआत फलफूलबाट गर्नुपर्छ । स्याउ सबैभन्दा फाइदाजनक हुन्छ भने मौसमअनुसार अरू फलफूल पनि खान सकिन्छ । अमला–मुरब्बा : पेटलाई स्वस्थ राख्न अमला तथा मुरब्बा खानुपर्छ । अमलाको क्यान्डी पनि खान सकिन्छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --
पुरुष डाक्टरप्रति विश्वास बढ्दो
नारी संवाददाता , चैत्र ५, २०७५
अहिलेको जीवनशैली, खानपान तथा रहनसहनका कारण पनि रोगले समात्छ । त्यसैले समयमै उपचार गराउनुपर्छ । दिनहुँ नियमित रूपमा केही समय व्यायाम गर्नुपर्छ । फास्टफुड तथा चिल्ला खानेकुरा खानुहुँदैन । अहिले अनावश्यक गर्भपतन गर्ने ट्रेन्ड बढेको छ । यसरी बढी गर्भपतन गराउनुभन्दा गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --
छाला र केश बचाएर खेलौं
डा. अपर्णा शाह (डर्मेटोलोजिस्ट), चैत्र ५, २०७५
हिजोआज रंग टल्काउन माइका टाट्राजीन ग्लास पाउडर प्रयोग गरिन्छ । यसले शरीरका छालामा निकै हानी पुर्‍याउँछ । यस्ता मिसावटयुक्त रङ्ग लामो समयसम्म प्रयोग गरे छालाको क्यान्सर समेत हुन सक्छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --